Daawo Sawirrada: Xuska munaasabadda 1-da Lulyo oo lagu qabtay Cadaado | Baydhabo Online
Daawo Sawirrada: Xuska munaasabadda 1-da Lulyo oo lagu qabtay Cadaado
Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasiamay islamarkaan lagu xusayay 56 sanad guuradii ka soo wareegatay markii ay Soomaliya xornimada qaadatay oo ku beegneeyd 1 Luuiyo sanadkii 1960-ki ayaa xalay lagu qabtay madyaxtooyada Dowlad goboleedka Galmudug .
Munaasabadda ayaa waxaa ka qeyb agalay Labada Gole ee Dowlad Goboleedka Galmudug iyo Saraakiisha ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Galmudug , siyaasiyiinta ,bulshada iyo Fanaaniinta xidigaha Galmudug, intii munaasabdu socatay ayaa waxaa halkaasi laga soo jeediayay qodbado la ixriira munaasabadda 1-da luuliyo .
Madaxdii munaasabada ka qeygashay oo ku dheeraaday ka hadalka qiimaha ay maanta oo kale ay leedahay ummadda Soomaliyeed xildhibaan Yuusuf Xasan Cali Gacal oo ka mid ah xildhibannada Galmudug ayaa ka sheekeeyay qiimaha munaasabadaan isagoona soo jeediyay tariikhda ay soo martay Soomaliya xiligii ay gumeystuhu haysteen iyo magacyada loo soo baxshay Soomaaliya waxa uuna sheegay in maanta Soomaliya ay dib u eegaan xornimadii ay heshay maalintaas maanta loo bahanyahay in midnamada la adkeeyo.
Koxaha fanaa’niinta xidigaha Galmudug oo halkaas ka soo jeediayay heeso ka turjumaya xornimada Soomaliya iyo guubaabada shacabka Soomaliyeed.
Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xashi Cabdi ayaa halkaas ka jeediyay hadallo ku aaddan munaasabadda 56 sano guuradii ka soo wareegatay markii gobolada koonfureed ee Soomaliayan ay ka xoroobeen gumeystihii talyaaniga iyo israacii gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed isla markaana si rasmi ah ay u dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliya.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa shacabka iyo ciidamada ugu mahadceliyay habka ay munasabadaan qiimaha badan u soo abaabuleen asaga oo tilmaamay in deegannada Galmudug laga doonayo in ay Soomaliya raadiso una horseeddo midnimada Soomaliya.
Ugu danbeeyntii markii waqtigu soo gaaray 12:00 am habeenimo waxaa ciidamada Qalabka sida ay dhoola tus balaaran ka sameeyeen fagaaro ay bulshada iskugu soo baxeen waxaana halkaas lagu saaray calanka muuqaweyn ee Soomaliya ayadoo bulshadii halkaas iskugu soo baxaday ay ku dhawaqayeen heesaha calanka jamhuuriyadda Soomaliya intaa kadib ayaa munaasabada waxaa soo xiray madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xashi Cabdi.